Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Ukuqhomfa okuZilawulayo ngokuSebenzisa ngokuSetyenzwa ngokuKhuselekileyo
Namhlanje, uphononongo loMfuziselo wokuKhaphanya nokuFundisa ukuba nokwenzeka kunye nokuSebenza (SAFE) lupapashwe kwi-Lancet Global Health. Abaxhasi bokuqhomfa ngokukhuselekileyo e-Colectiva Feminista La Revuelta de Neuquén (Argentina), GIWYN (Nigeria), nakuMzantsi-mpuma Asia, kunye nabaphandi kwi-Ibis Reproductive Health (eMzantsi Afrika nase-USA), bayila baza baphumeza uphononongo loKHUSELEKO.
Uphononongo lwe-SAFE, uphononongo lokuqala lohlobo lwayo, lwaqesha abantu abangaphezu kwe-1,000 abanxibelelana neqela elikhuselekileyo lokukhupha isisu eArgentina okanye eNigeria, babalandela kangangenyanga enye, kwaye balinganisa iziphumo kumava abo okuqhomfa okulawulekayo, ngokuqhomfa ngaphandle kotyando. ungenelelo njengesiphumo sokuqala.
Ukuqhomfa amayeza okuzenzela ngokwawo kubandakanya ukusetyenziswa kwerejimeni enye yamayeza amabini ukuphelisa ukukhulelwa ngaphandle kweliso lonyango elicetyiswa nguMbutho wezeMpilo weHlabathi (i-WHO). Iirejimeni zeyeza ezicetyiswa yi-WHO ze-mifepristone ngokudibanisa ne-misoprostol, okanye i-misoprostol yodwa, zisekwe iindlela ezikhuselekileyo nezisebenzayo zokuphelisa ukukhulelwa kwizicwangciso zeklinikhi. Ukuqhomfa okuzilawulayo kunye nokukhatshwa kubandakanya abacebisi bokuqhomfa abangaqeqeshelwanga ngokwekliniki abanikezela ngolwazi olusekelwe kubungqina malunga nokusetyenziswa kokuqhomfa amayeza, kunye novelwano lweemvakalelo (kwaye ngamanye amaxesha nenkxaso yomzimba), kuyo yonke inkqubo yokuqhomfa amayeza alawulwa nguye. Ukukhatshwa kokuqhomfa kunikezelwa ngefowuni, ngamaqonga omyalezo wedijithali akhuselekileyo, kunye/okanye ngokobuqu.
Uphononongo lwe-SAFE luqinisa ubungqina obukhoyo bokuba, ngolwazi oluchanekileyo, abantu banokusebenzisa ngokukhuselekileyo nangokufanelekileyo amayeza ukuphelisa ukukhulelwa ngaphandle kwendawo yeklinikhi. Ezi zinto zifunyanisiweyo zibonelela ngobungqina bokupheliswa kwezonyango kukhathalelo lokuqhomfa kwangoko, kunye nokuxhasa ukubaluleka kokuqhubeka nokufikelela kwiimodeli ezikude zokuqhomfa amayeza-kubandakanya ne-telemedicine-eye yaphunyezwa kumazwe aliqela ngenxa yobhubhani we-COVID-19. Iziphumo ezivela kolu phononongo zikwacebisa ukuba i-SMA ngenkxaso evela kwinkxaso ehambayo inokuba sisicwangciso esingundoqo sokwandisa ukufikelela kukhathalelo olukhuselekileyo, olusebenzayo lokuqhomfa.